အင်ဒိုနီးရှားကုန်သည်များ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ချီးမြှင့်သည့် အဓိကဆုကြီး - MAZDA HOKI
၂၀၁၇ သြဂုတ်လအတွင်းတွင် FBS အင်ဒိုနီးရှားထရိတ်ဒါပါတီကို ဘာလီတွင် ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်. FBS၏အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးသော တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် ထို အင်ဒိုနီးရှားပွဲတွင် တက်ေ၇ာက်လာသူ ဧည့်သည်တော်များအတွက် အံ့အးသင့်ဖွယ် ဆုလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ခဲ့ရာ အဓိကဆုကြီးဖြစ်သည့် - Mazda Hokiမော်ဒယ်အသစ် ကားအသစ်စက်စက်ကြီးကို မကဆာမှ ကံထူးရှင် Mr. Karim Abidinက ရရှိသွားခဲ့ပါသည်.
Mr. Karim Abidinတစ်ယောက်အတွက်မူ - အံ့အားသင့်ဖွယ် လိုက်ဖ်ရှိုးများကို တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိခဲ့ရုံသာမက မိတ်ဆွေသစ်များရရှိကာ အကောင်းစား ကားသစ်ကြီးကိုပါ ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်!
ကံထူးရှင်၏ မွေးရပ်မြေဖြစ်သည့် မကာဆာမြို့သို့ Mazdaကားသစ်ကြီးအား လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပို့ ပေးလိုက်ပြီု့ဖြစ်ပါသည်. ကံထူးရှင်မှာ အတိုင်းထက်အလွန်ပင် ပျော်ရျွှင်ကြည်နူးနေခဲ့ပါပြီ. ထိုကားသစ်ကြီးဖြင့် ကံထူးရှင်တို့ မိသားစုများ သက်တောင့်သက်သာနှင့် အဆင့်မြင့်မြင့် သွားလာနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်:
အိပ်မက်ကြီးကြီးထားပြီး အောင်မြင်အောင် စတင်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ၊ တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင် ထိုအိပ်မက်များ အမှန်တကယ် ပြည့်ဝလာပါလိမ့်မည်!